Laascaanood – Mudaharaad Lagu Taageerayo Aqoonsi Lasheegay inay Khaatumo Ka Heshay TFG,Dhaawac,Bandaw | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, WARARKA	> Laascaanood – Mudaharaad Lagu Taageerayo Aqoonsi Lasheegay inay Khaatumo Ka Heshay TFG,Dhaawac,Bandaw
Wararka laga helayo magaalada Laascaanood ayaa ku soowaramaya in laba qof ay ku dhaawacmeen mudaharaadka ka dhacay magaalada Laascaanood, labada qofna ay yihiin dadka deegaanka.
Mudaharaadkuna ahaa mid lagu taageerayo warka ah “Maamulka Khaatumo waxaa aqoonsatay dawladda Soomaaliya”.
Haddaba siday rabshaduhu udhaceen war sax ah kama hayno,marka laga reebo laba qof oo dhaawacmay,waxaade war badan aad ka helaysaa,waraysiyo iyo warbixino ay qaaday idaacadda bbc da oo aan qoraal ahaan idinku soo gudbiyay.
Idaacadda BBC da ayaa warkan kasoo gudbisay dad ka waramaya mudaharaadka iyo sida ay wax u dhaceen ka waramaya,waxaana laga siidaayay habeenimadii.
Waxaad dhageysataa idaacadda BBC da waxaadna akhrisaa qoraalkan,waxaa laga yaabaa inaad fahanto wax yaalo badan oo aan anigu fahmi waayay oo aan baneeyay ama aan si fiican u maqli waayay,waxaadna ku arki doontaa ……ama !.
Halkan ka bilaw Warka BBC.
Ugu yaraan hal qof ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmay isku hor imaad rabshado watay oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee Caasimadda Gobolka Sool.
Isku hor imaadkan ayaa wuxuu dhexmaray Booliska Soomaaliland iyo dad dibad bax dhigayay.
Dibad baxa ayaa lagu taageerayay aqoonsiga ay dawladda KMG ah ee Soomaaliya ay siisay maamulka dhawaan looga dhawaaqay SSC maamulkaas oo loo bixiyay Khaatumo.
Wariyaha BBC da oo kasoo waramaya
Si goos goos ah ayaa mudaharaadyo uga dhacayeen magaalada Laascaanood ilaa iyo xalayto iyadoo ay kasii horreeyeen kuwo kale oo ilaa shaley ka dhacayay magaalada Buuhoodle.
Haddaba galabnimadii galabta ayaa booliisku waxa ay adeegsadeen rasaas iyagoo fulinayay amar kasoo baxay maamulka gobolka oo bandaw lagus oo rogay magaaladaasi.
Siday wax u dhaceen waxaan ka wareystay dad kala gaddisan, markii hore waxaan la xiriiray nin ka mid ah odoyaasha magaalada oo la yiraahdo Qamadi Saleemaan Cali.
Qof laga waraysanayo Laascaanood
Mudaharaadkani wuxuu ku saabsan yahay maamulkii khaatumo ee Taleex lagu sameeyay berigii dhaweyd oo la yidhi waxaa loo aqoonsaday maamul,maamulada Soomaaliya ka mid ah..! dadku shalay iyo maantaba waxay isaga daba noqonayeen damaashaad iyo ..! iyo ….. wax noocaas ah magaranaysa.
Bilaysku Bilays baa soo galay magaalada rasaas bay ….oodda kaga qaadeen …..
magaaladiiba waa bandaw gareeyeen magaranaysaa
4 ta galabnimo wixii loo gaadho waa bandaw bay yiraahdeen, suuqa waa la xidhay,
xaaladdu haddeerto ……wax ..dhacay lama sheegin.
Waa tahay dhinaca kale waxaan la xidhiidhay nin ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgala gobolka Sool magaalada Laascaanood isgaoo jooga oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Cali ducaale.
Qof kale oo Laascaanood laga waraysanayo
Cabdiraxmaan iiga waran mudaharaadyada ka dhacaya magaalada?
Waad mahadsan tahay xuseenaw sida la ii xaqiijiyay laftayduna aan arkay gaadhi markaa lagu wado dhaawac, mid ka mid ah dhaawacaasi …halka laba qof ay ka yihiin sida isbitaalka la ii xaqiijiyay dad goob joogayaal ah.
“Laba qof baa laguu xaqiijiyay oo dhaawc ah oo mid kamid ah aan indhahayga ku arkay iyadoo! gaadhiga lagu wado”.
Waa tahay wax kale oo dhimasho ah ama qasaare kale oo aad aragtay ma jiraa?
Wax kale oo qasaare ah ma jiro marka laga reebo labadaa qof ee dhaawaca ah ..magaalada rasaas ayaa ka dhacaysa goos goos ah oo markaa isugu jirta mid waaweyn iyo mid yar yarba oo markaa ay isticmaalayaan bilayska iyo .. oo markaa ay dadka ku kala eryayaaan.
Hadda magaaladu wey deggan tahay,meheraduhu inta badan wey furan yihiin, meelaha qaarkood ee uu ka dhacay mudaharaadku ayaa xidhan.
Maamulka Gobolka oo ay la xidhiidheen wariyayaashu ayaa waxa ay iisheegeen in ay barrito shir saxaafadeed qabn doonaan inta ka horreysana ay qiimeyn doonaan xaaladdani inta ay la eg tahay.
Resolving Syrian crisis ‘up to the Syrians’ – Moscow Libya ready to use force against eastern separatists -RT